DA-BC37001 2020 inopisa inotengesa yekubheka yakagadzirwa muChina
DA-BC13001 cast iron cookware 2020 inopisa inotengesa mhando
DA-BC13001 cookware yakaitwa muchina 2020 inopisa kupisa
Kune zvakawanda zvakanaka zvekubika nesimbi simbi yekubika. Imwe yemabhenefiti akakosha kuve nekubika nemafuta mashoma kana iwe uchinge wawana yakanaka mwaka kune yako yekubikira. Izvi zvinobvumidza chikafu chisina mafuta uye nemafuta mashoma kuti awane crispy shava yekunze kutumbuka. Imwe bhenefiti ndeyekuti kana uchishandisa cast iron yekubikira simbi inodzivirira chikafu chako nesimbi. Pamusoro pezvo iyi inyowani yemakemikari yemahara kune mamwe achangopfuura matanda mapani senge Teflon kana Ceramic
DA-BC26001 / 32001/32002/37001/37002 yakakanda simbi 2020 inopisa inopisa yakaitwa muchina